Iipowusta ezintathu ze-NASA ukuba uphuphe ngokuba ngumkhenkethi wendawo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-NASA ifuna ukukukhuthaza ukuba ubeke ezokhenketho kwezi poster zintathu
Ngaphantsi konyaka odlulileyo i-SpaceX, inkampani yendawo ka-Elon Musk (i-CEO yeTesla), yasikhuthaza ukuba sicinge luza kuba njani uhambo lwesithuba semars ngothotho lwe imifanekiso ekumgangatho ophezulu kunye nokusetyenziswa kwemibala yebala.
Ngoku yi-NASA efuna ukwenza kunye nokwenza umkhankaso wentengiso "Thengisa" indawo yokhenketho yendawo ukuhamba kwiplanethi apho sele baninzi abaseta injongo yokufika kwabantu, iMars.
Ezi powusta zi imizekeliso ngokugqiba okukhulu Kwaye ungathatha ngokugqibeleleyo ukuya eludongeni lwegumbi lakho ukuthelekelela umkhenkethi wexesha elizayo oza kundwendwela ngaxa lithile loo mihlaba yomileyo apho kutshanje kufunyaniswe ukuba kukho ubomi.
I-NASA iyalele abayili abaninzi kwaye Imizobo yenkampani engabonakaliyo ukwenza uthotho lweeposta ngazo zonke iintlobo zoyilo. Eyona nto ibaluleke kakhulu, ngelixa ekuqaleni zazenzelwe abasebenzi ngokwabo kunye namalungu orhulumente, ngoku banokuthengwa malunga ne- $ 40 inye.
Inyaniso kukuba umgangatho ngamnye kunye into evelisayo iyakhuthaza, nangaphezulu ukuba umntu ubonile imovie iMartian. Okwangoku kukho iipowusta ezintathu, kodwa nganye kuzo itsalela ingqalelo kwabo abo bathe ngaxa lithile badlula kwingcinga yabo eyakuba kukuhamba baya kwiplanethi iMars.
Ezi poster ungazithenga ezivela kwiwebhusayithi yabayili okanye efanayo Ukukhuphela umfanekiso kwinkcazo ephezulu ukuseta njengephepha lodonga. Le mizekeliso mithathu yinyanga kaSaturn uEnceladus, omnye ovela kwimishini yeVoyager eyayihamba ngenxalenye yesixokelelwano selanga, kunye nowokugqibela eMars.
Omnye inyathelo elimangalisayo leNASA ukuba ngalo mzuzu siwunikela ukuba sicinge ukuba ngabakhenkethi bendawo ukuze inzala yethu, ngaxa lithile, ibe ngabathathi-nxaxheba bokwenyani bengcinga yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » I-NASA ifuna ukukukhuthaza ukuba ubeke ezokhenketho kwezi poster zintathu
Uyilo lwezixhobo: Jonga uYilo lweWebhu yanamhlanje